लोपोन्मुख काङ्ग्रेसको नाक - Ratopati
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफ्नै नाक जोगाउन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकको विशेष र महत्वपूर्ण एजेण्डा नै नेका पार्टीको १३ औँ महाधिवेसनपछि हराएको नाकको खोजी गर्नु रहेको देखिन्छ ।
२००७ सालको ऐतिहासिक क्रान्ति सम्पन्न गरेको पार्टी, जननायक बी.पी. कोइराला, लौहपुरुष पार्टीका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता एक समयका अग्ला नाकहरु भएको अग्लो पार्टी अहिले नाक देखिन थालेका छन् । एक समयका तीव्र घ्राणशक्ति भएका नेकाका नाकहरु अहिले सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हुन त चन्द्र भण्डारी जस्ता युवा नेताहरु नाक जोगाउन सङ्घर्षरत रहेका छन् ।
पार्टी बैठक नाक जोगाउन गरमा गरम बहसमा केन्द्रित छ । सबै नेताले पालैपालो बहस गरिरहेका छन् । चन्द्र भण्डारीले बहसमा भाग लिँदै आफू काङ्ग्रेसको नाक जोगाउन सडक आन्दोलनमा रहेको बताए । उनले हामीले हाम्रो गौरवशाली नाकको महत्व हामी आफैँले नबुझेको बताए । भण्डारीले बी.पी. कोेइरालाको अग्लो राष्ट्रवादी धारको नाक भाँच्न जवाहरलाल नेहरुसम्मले अनेक षडयन्त्र गरेको बताए । वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक जगत नेपालले बीपी–महेन्द्र टकराव नामक कृतिमा यसको नालीबेली लगाएको पनि भण्डारीले उल्लेख गरे । त्यति मात्र होइन इन्दिरा गान्धीका अनेक तिकडम विरुद्ध जुधेर बीपी कोइरालाले नेपाली नाक जोगाएको यथार्थ भण्डारीले बैठकमा राखे । यी सब बेलिबिस्तार लगाएर भण्डारीले आफ्नो नाक आफैँ जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने कुरा बताए ।
उनले नाकसित नाकको मात्र सहमति, समझदारी हुनसक्छ तर हामीले नाकसित अनावश्यक, अनैतिक र असान्दर्भिक गठबन्धन गरेर आफ्नो नाकको इज्जत र आबरुद्ध घटाएको सप्रमाण उल्लेख गरँे । उनका कुरामा धेरै युवा नेताले पररर ताली पड्काएर समर्थन जताए । बोल्ने पालो कुरेर बसेका सशक्त युवा नेता गगन थापाले आफू पनि पार्टीको नाक सफा गर्न निरन्तर लागिपरेको बताए । उनले आफू भर्खर वीर अस्पतालबाट सीधै पार्टी बैठकमा आएको बताउँदै थापाले नेकाको नाक आफूले अहिले धमाधम सफा गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले पार्टीको नाक धेरै पहिलेदेखि कटकटिएको र सिँगानै सिँगानले ठसठसी गन्हाउने भएको बताए । थापाले नेकाको मात्रै होइन, देशको नाक नै उँचो राख्न स्वाथ्य योजनामा लागिरहेको बताए । निक्कै लामो समयदेखि निमोनिया जाम भएकाले नेकाको नाकको घ्राणशक्ति अत्यन्त क्षीण भएकाले रोग पत्ता लगाउन कठिन परेको हुँदा नाकको मेजर अपरेशन गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर थापाले बताए । अर्का युवा नेता गुरुराज घिमिरेले भारतीय शासकको नस धैरै सुँघेर नेकाको नाक ड्यामेज हुन लागेको बताए । उनले नेकाका निवर्तमान सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको संविधान निर्माण गरेर अग्लिएको नाक मात्र होइन उनको व्यक्तित्व भारतीय नसका कारण तीनबित्ता उचालिइएर कहिल्यै नउठ्ने गरी थेचारिएको बताए । त्यति हुँदा र गर्दा पनि पार्टी अध्यक्ष र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतेली शासक सामु लम्पसार परेको पीडा घिमिरेले ओकले ।
पार्टी बैठकमा नेकाको ऐतिहासिक रुपमा अग्लो नाकको धेरै प्रशंसा पनि भयो । ०४६ सालमा गणेशमान सिंहको लौह नाक घरको चारतला माथिबाट देखाएकै भरमा आन्दोलन सफल हुन पुगेको नाक प्रभावको विशेष चर्चा भयो । उता डा. शेखर कोइराला भने आफू युवा नेताका अगाडि पछि पर्ने हो कि भन्ने डरले गगन थापा बोल्दा बोल्दै कड्किएर बड्किए । शेखर कोइरालाले नेकाको नाक एमाले अझ ओलीका नाकको पेलाइमा परेर भाँच्चिएको बताए । उता ओली भने मुखले बोल्न पाएनन् भने नाकले नै बोलेर हामीलाई तिरिखिरी पारिरहेका छन् कोइरालाले भने । ओलीलाई मुखले धेरै बोले भनेर प्रधानमन्त्रीबाट हामीले माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासित मिलेर लघारेको त उनी नाकले पनि बोलेर उल्टो हामी माथि खनिएका खनिएकै छन् ।
ओलीको बोलीले गोलीलाई पनि निस्तेज पार्दो रहेछ । ओलीको कस्तो अचम्मको बोली ? उनका एक शब्द र वाक्यबाट अनेक अर्थ, आशय र सन्दर्भ खुल्दा रहेछन् । उनी सूर्य अस्ताए भन्ने एक वाक्यबाट अनेक अर्थ घोल्न सक्ता रहेछन् । वास्तवमा सूर्य अस्ताएभन्दा गोठाला, खेताला, किसान, नवविवाहित जोडी र चोरले आआफ्ना भावना अनुसारका अर्थ बुझ्दा रहेछन् । सराकार पक्ष अर्थात् हामी भने सूर्य अस्ताए भनेपछि चोरले अब चोरी कर्मको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै अर्थ बुझेझैँ गरेर ओलीलाई सराप्दा रहेछौँ । मधेसी मोर्चाका नेता ओली बोलीको सघन विम्बमय तथा बहुअर्थी प्रतीकात्मक अर्थ गहिराइ नबुझेर हैरान देखिन्छन् । डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छे त ओलीसित उपयुक्त शब्द, शैली र भावगाम्भीर्य बोलीले प्रतिवाद गर्न नसकेर उल्टो ओलीलाई पाँडेगाली गर्न थालेका छन् ।
कतिपयले ओली लक्षित त्यति निकृष्टतम गाली गलौजपूर्ण बोलीवचन प्रयोग गर्नका लागि डा. बाबुरामले विद्यावारिधि गर्नै पर्ने थिएन पनि भन्छन् । हुन पनि डा. बाबुरामको वर्णशंकर नाक पहिचानविहीन देखिन्छ । यो नेपाली नाक होइन झैँ जस्तो देखिन्छ । यस्तो नाकले ओली नाकसित निहुँ खोज्नु पहाडसित कुइना जुधाउने दुस्साहस गर्नु मात्र हो । बरु कट्टर विरोधी पार्टीको भए ओली बोलीको महान् क्षमता हो भन्दै शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति देउवालाई पुलुक्क हेरेर हल्का मुस्कान छोडे । यसको अर्थ देउवाको अस्पष्ट बोलीप्रति कटाक्ष गरेर देउवालाई कोइरालाले चिढ्याउन खोजेको स्पष्ट देखियो । यसरी शेखरले देउबालाई रिस उठाउनुपर्ने मूल कारण चाहिँ पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनमा आफ्नू लोकप्रिय भएर ठडिएको नाक देउवाले नराम्ररी ताछेकामा रहेछ । पार्टीको १३औँ महाधिवेशन भएको एकवर्ष पछि भएको पार्टी बैठकले निर्माण गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समितिमा शेखरको लोकप्रिय नाकलाई लोप्पा ख्वाइयो । बैठकमा नेकाको नाकले जो पायो त्यहीसित नाक जोड्दा र रगड्दाको परिणाम नाक कमजोर भएको कुरा पनि उठ्यो । कहिले राणासित जोड्ने, कहिले राजासित लेप्पास्सिने, कहिले आफ्नै नाक चार इन्च घटुवा गर्ने उग्रवादी नाक कटुवासित काङ्ग्रेसले आफ्नै नाकमा नथुनी लगाउँदा नेकाको नाकको औकात घटेको विषय जोडदार रुपमा उठ्यो ।
बदनाम, गुमनाम नाकसितको सहकार्यको परिणाम नेकाको नाकको मौलिकता समाप्त हुन लागेको चर्चा चल्यो । खाद्य, अखाद्य, पेय अपेय, स्वस्थ्य अस्वथ्य, कुपोषण सुपोषण, जीवन रक्षक र भक्षक जस्ता कुरामा कत्ति ख्याल नगरी जे भेट्यो, जहिले भेट्यो, जहाँ भेट्यो, जत्तिखेर भेट्यो र जत्ति भेट्यो त्यत्ति हसुर्दाको परिणाम नेकाको नाकमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको पनि समीक्षाका क्रममा जबर्जस्त उठ्यो । यसैले गर्दा कतिपय नेका नाकहरु काराबासका अतिथि र प्रमुख पनि बनेको पनि चर्चा भयो । जहिले जहिले लोकतान्त्रिक तथा जनतान्त्रिक नाक मिले, त्यतिबेला नेकाको नाकको इज्जत आबरु बाँचेकै थियो । यसले संयुक्त जनआन्दोलन सफल बनेको थियो, राजशाही पञ्चायती शासन ढालेको हो । मूलभूत रुपमा यिनै दुई नाक मिल्दा ०६२–०६३ को आन्दोलन सफल भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ पनि यिनै दुई नाक मिलनको परिणाम हो । रिस खा आफू गर्दा नेकाको नाक अलपत्र परेको हो । खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो गर्दा पनि नेकाको नाक कमजोर हुन पुगेको हो । आफ्नू नाकसित जोसुकै नाकसित मिलाउँदा नेकाको नाक प्रदूषित बनेको हो ।
नेका नेता धनराज गुरुङले हामीले आम जनताका बीचमा गएर नाक सफा गर्न, स्वथ्य राख्न र यसको आवरु राख्न के गर्नुपर्ला भनेर एक अभियान मार्फत् सोधपुछ र रायपरामर्श गर्नुपर्ने बताए । एमाले वा ओलीको नाकका विरुद्ध आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै इतर नाकको गठबन्धन जरुरी रहेको चङ्ख, चतुर, वाचाल नेका नेता विश्वप्रकाश शर्माले उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवार राष्ट्रवादको भ्रमपूर्ण नारा अघि सारे । ओली राष्ट्रवादलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनी फलाकेर कहिल्यै नथाक्ने शर्माले नजिक बसेका चन्द्र भण्डारीका अगाडि शिर ठाडो पारेर आफ्ना पाराका नारा भने निर्धक्क उल्लेख गर्न सकेनन् ।
विश्वप्रकाशले एमाले र मधेसी मोर्चाका दुई अतिवादी उग्रवादी आवाजका बीच नेकाको बीचको आवाज भद्र र मसिनो रहेको भन्दै देउवा नेतृत्वको स्वस्तिवाचन गरे, जब कि नेकाले देशका जल्दाबल्दा र अति महत्वपूर्ण विषयमा बोल्ने त परै जाओस् मुखसमेत बाएको देश र दुनियाँलाई थाहा छैन । तर देउवाको मौन, मुक र ज्योतिष वाणी सुन्ने नेका नेतामा शर्मा मात्र एक होलान् र सुने होलान् ।
राजविराज घटनापछि नेकाको भद्र र मसिनो स्वरको सान्दर्भिकता अझ बढेको भन्दै के सक्यो अनि दैलो देख्यो भनेझैँ नेकाको नाक जोगाउन केही रोमान्टिक योजना शर्माले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको हालैको फैसलाबाट नेकाको नाथ्री फुटेको नाकका सही उपचार गर्ने बारेमा भने भोलिको बैठकमा विशेष छलफल गर्ने पार्टीले निधो गरेको थाहा भएको छ ।